Tinye n'ọrụ BlueOcean si nweburu AI Un kpọghee ekwt ejikọrọ Fitness Brand Insights | Martech Zone
Kwa afọ, ọkachasị ka anyị na-abịaru ezumike ahụ wee tụgharịa uche na mkpọsa a na-echefu echefu n’afọ, a na-enwe ọtụtụ ọgụ iji hụ ụdị ndị dọtara ndị na-ege ntị. Site na nchekasị na ejighị n'aka nke ọrịa ahụ butere n'afọ a, enwere ọgụ ọhụrụ, na nke ugbu a ọ bụ ọgụ maka ahụike anyị.
Ka anyị na-emegharị ihe niile anyị na-eme n'ụlọ, anyị hụrụ ka ọrịa a ji eme ka ọdịnihu dị mma. Ngwá ọrụ dị n'ụlọ dị ka Peloton, Mirror, na Tonal, nyeere anyị aka ịmaliteghachi echiche nke nkịtị ka anyị chọtara ụzọ okike iji nọgide na-arụ ọrụ na-enweghị ịbanye mgbatị. Ma ebe ụfọdụ ụdị dịka Peloton rịrị elu na ewu ewu, ụdị ndị ọzọ, dị ka Echelon, nwere akara zuru oke adaghị.
Branddị gị bụ Ahịa Ekekọrịta Gị
Dika ulo oru amaara ama maka imeputa ihe nlere na data, anyi jiri igwe eji enyere anyi aka inyocha ihe ndi ozo di nma. Peloton, NordicTrack, mirror, Tonal, FightCamp, Echelon, na ijeụkwụ iji hụ otu ndị a siri pụta n’etiti ibe ha, na ụdị akara nke ga-emesị merie.
N'ileghachi anya n'ihe dịka usoro mgbasa ozi mmekọrịta, mgbasa ozi, blọọgụ, ọdịnaya weebụ / okporo ụzọ, ọgbakọ na ntanetị, na nyocha, nyocha anyị mepụtara BlueScore maka ụlọ ọrụ nke ọ bụla, na -elekọta arụmọrụ ha niile n'etiti ibe ha. Ọ dabere n'usoro amara, pụrụ iche, otu, ihe dị mkpa, ma asọpụrụ ụdị ha n'etiti ndị na-ege ha ntị.
Tonal Na-egosiputa na Ọzụzụ Ike Ike nwere ikike ịpụpụ Spins
Nnyocha nyocha anyị chọpụtara na Tempo na Echelon nọ n'ọkwá dị ala. Echelon's Prime igwe kwụ otu ebe media plummet mere ka ha were nke kachasị dị mkpa n'etiti ndị na-azụ ahịa. Iji dozie akara ha, ha ga etinye ego na nnukwu mkpọsa mmekọrịta - dị ka ịchekwa ndị nnọchi anya ama ama dịka Chrissy Teign ma ọ bụ John Legend, iji mee ka ọkwa ndị ahịa dịkwuo elu.
Peloton na-eduzi mkpọ ahụ n'ihi mpaghara ya / mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọ bụ ezie na ọ nwere vidiyo vidiyo na-adịghị mma nke Krismas n'afọ gara aga, ọ ghaala azụ. Ha na-agụzi ụlọ ahụ wee na-akụnye ihe ndị ahịa chọrọ n'ezie. Mkpakọrịta na Beyonce na iweta mmemme ahụike na akụkọ ihe mere eme Black kọleji na mahadum bụ nzọụkwụ na ụzọ ziri ezi maka akara ha.
Naanị otu isi n'okpuru Peloton, ndị na-asọmpi Tonal
Mana m ga-etinye nzọ m na Tonal. N'iji akara nke abụọ kachasị asọpụrụ na naanị otu isi n'okpuru Peloton, Tonal na-apụta ndị asọmpi n'ihi na ọ maara etu esi adọta ndị ahịa ya site na ịkọ akụkọ na mbụ. Obi ụtọ Tonal nwere na Peloton, mana ha enweghị ọgụgụ isi na mmata. Ọ bụrụ na Tonal na-aga n'ihu itinye ego na mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ mgbe ị na-ewu ọnụnọ obodo, ọ nwere ike iwepụ oke ahịa na Peloton.
N'ụzọ na-akpali mmasị, FightCamp nwere ọtụtụ ọnụahịa ọnụahịa, na-enye ọtụtụ ndị ahịa nri. Agbanyeghị, ọnụahịa ahụ abụghị ihe na-akpata ịnya ụgbọ ala ndị ahịa na-eji iji chọpụta nkwado ha maka akara. Yabụ na ọ baghị uru. Ihe omuma anyi gosiputara na obu ezie na Lululemon huru ugha anya, ahia ya adighi nma. Iji bulie akara ya, ha ga-etinye ego na mgbasa ozi ahịa na-agbanwe agbanwe - nke nwere kpakpando TikTok nwere ike ịme aghụghọ ahụ.
Iji Ihe Nghọta A Eme Iji Kwalite Yourdị Gị
Maka ndị ahịa na-echepụta ụzọ iji nọrọ n'ihu asọmpi Karịsịa n'oge ọgba aghara, kedụ ihe ị ga-eme taa? Nke a bụ ndụmọdụ m:
Community bụ eze: Gee ndị na-azụ ahịa ntị. A na-ewu akara siri ike na ụkpụrụ, ozi siri ike, na ike na-akwado ogidi ndị ahụ.
Gụọ ụlọ: Tupu ịga n’ihu n’ịgbasa ozi ahịa, jụọ onwe gị, nke a ọ na-emetụta echiche nke taa?
Akwụsịla ịmụ ihe: Ọ dị mkpa ka ịlele otu akara gị si dị n'etiti ndị asọmpi. Ke mme ikpehe ewe ke afo ọfọn akan? Olee ihe ndị ọ ga-abụ imezi emezi? Na-enyocha akara gị mgbe niile ga-enyere gị aka ịmeziwanye usoro gị na ahụike gị niile.
Na mmechi, akara nwere ozi na-agbanwe agbanwe yana obodo siri ike n'ịntanetị ga-eme nke ọma. Ọ bụ ezie na ọtụtụ narị ụdị nwere mmasị ilekwasị anya na mgbasa ozi dị oke ọnụ na n'elu azụmahịa, ọ bụ mkparịta ụka na-eme na ntanetị na-eme ntanetị na-ebute nsonaazụ na akara a hụrụ n'anya. Chee echiche banyere mpaghara ndị ọzọ, obere ịdị ebube.
Tags: ainghọta ndị na-ege ntịblueoceanacha anụnụ anụnụika nghọtanghọta ahịajikọọ mma ngwanjikọ mma ụdịEchelonFightCampmma ngwamirrorNordicTrackPelotonogeTonal
A Comprehensive Guide To Iji LinkedIn Sales Navigator
Dec 24, 2020 na 4:33 PM
Nnyocha dị egwu, Liza. O doro anya na ọ dị mma ịhụ etu BlueOcean's algorithm si agụta ọtụtụ mgbanwe dị ka akara ahaziri ahazi maka akara ọ bụla.
Ọ dịkwa mma iji tụnyere ọnụ ọgụgụ gị ọnụ ọgụgụ ka njọ karịa nyocha ndị ọzọ gbasara onwe m mere na oghere. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe, enwere m edemede mara mma na-atụle Tonal, Tempo, na Mirror ebe a: (https://zenmasterwellness.com/tonal-vs-tempo-vs-mirror/ ). Enweghi ike itinye ụfọdụ n'ime nyocha azụmaahịa m lekwasịrị anya na nyocha n'ọdịnihu, w / akwụmụgwọ enyere 🙂
Liza, nnukwu ederede na echere m na ọ bụ eziokwu na Tonal na-akụda akụkọ, wee nweta otu mgbatị mgbatị m (nke ahụ ekwenyeghị na akụrụngwa ejiri ya) tinye ego na otu.
Peloton bụ onye ndu, mana Tempo na-agba egbe (yabụ MYX). Enwere m obi ụtọ na ị kpọtụrụ ọgụ ọgụ - mara maka nke ọma.
N'ikpeazụ, ọ dịghị mfe ịhọrọ otu n'ime ndị a dị ka nwanyị. N'ikpeazụ, m họọrọ Tempo, mana echere m na m ga-enwe obi ụtọ na Tonal ma ọ bụ Enyo. Maka ụmụ nwanyị nọ ebe ahụ chọrọ echiche nwa agbọghọ, lee ntule enyerela ụmụ nwanyị aka ikpebi - https://www.fithealthymomma.com/tempo-vs-tonal-vs-mirror/. Ọ bụ nnukwu ego, mana nke ahụ bụ teknụzụ maka gị, na Tempo nwere ike ịnwe AI kachasị mma ugbu a. Ọ gaghị eju gị anya ma ọ bụrụ na ndị ọzọ ejide.